मुनाफा खोज्नले सहकारी बन्द गरेर अन्यत्र गए हुन्छ « Arthabazar.com
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार २१:३९
सहकारी भनेको हाम्रो सदस्यको कसरी अधिकतम हित गर्ने भनेर खोलेको हो । तपाईलाई त्यो स्वायत्तता छ । त्यो स्वायत्तता सदस्यको हित विपरित काम गर्नको लागि बनेको हैन । २२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३६ प्रतिशत ब्याज लिनको लागि बनेको हैन । त्यो छुट तपार्इंलाई छैन ।
सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ? त्यसकारण यो ब्याजदर सदस्यको पक्षमा छ । सदस्यको हितमा छ सञ्चालकको हितमा हैन । त्यसकारण सहकारी संस्था चलाउँदा हामी ऐन नियम मान्दैनौं भनेका छन् । त्यही ऐनद्वारा जन्म भएको हैन सहकारी ? सहकारी ऐनद्वारा जन्मने । अनि आफैं त्यही ऐन मान्दिन भन्ने ? ब्याजदर मान्दिन, अन्य कुरा मान्दिन भन्न मिल्छ । त्यसो हो भने म सहकारी नै चलाउँदिन भनेर बन्द गर्नु । त्यही ऐनमा बन्द गर्ने व्यवस्था छ हामी बन्द गरिदिन्छौं । चलाउन नसक्ने हो भने बन्द गर्नु । अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ । किन यो नै रोज्नु भएको ? यो त व्यवसाय पनि हैन । सहकारीले अधिकतम सहकारीको सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिएर, सानो पुँजी संकलन गरेर यसलाई सम्पन्न बनाउने, आय आर्जनको काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पुँजी परिचालन गर्ने हो । अधिकतम ब्याज लिएका कारण अहिले आएर समस्या भएको हो । अहिले १२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् ।
हामीले यति लामो समय अध्ययन गरेर लागु गरेको हो । हतारमा आएको हैन । यो छलफल गरेर आएको छ । ऐनमा नै लेखिएको छ कि सहकारी महासंघले सम्बन्धित विषयगत संघहरुले मातहतका सहकारीहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो । यो कार्यान्वयन नभएको खण्डमा बढी ब्याज लिने कारबाहीको भागिदार हुन्छ । ऐनद्वारा जन्म भएको हो । त्यही ऐनले निर्धारण गरेको काम कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन हामी कारबाही गर्छौं । यो कुरामा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् ।
अब सबै स्थानीय तहमा यो सन्देश दिन जरुरी छ । तपाईंको तहमा भएको सहकारीले ऐन कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुखलाई निर्देशन दिने तयारीमा छौं । हामी सबै प्रदेशमा गराउँछौं । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा चिन्ता छ । तपाईहरु पनि चिन्तिन हुनुपर्छ । सहकारी नाफा उन्मुख संस्था हैन । मुनाफा उन्मुख संस्था खोल्ने हो भने त्यो सहकारीको मूल्य मान्यता आदर्श विपरित हुन जान्छ । त्यसैले यो सहकारीको क्षेत्र छोडेर अन्यत्र गए हुन्छ । उद्योग खोल्नु उत्पात नाफा कमाउनु । सहकारीमा बसेर मुनाफा कमाउने, संस्था धनी बनाउने भन्ने हिसाबले हैन । हिँजो साउले चर्को ब्याज लिन्थे । आज आएर सहकारी चाँही संस्थागत साहू हुने ? सहकारी संस्थागत साहू हुन खोजेको छ नि ? त्यसैले सहकारी ऐनको परिपालना गरेको हो । तपाईलाई हस्तक्षेप गरेको हैन । ऐनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरेको हो ।
स्वायत्तताको कुरामा आफूलाई सहज हुँदा स्वायत्तता, असहज भएपछि सरकार के हेरेर बसेको भन्ने ? आफूलाई सहज भएसम्म २२, २४, २६ प्रतिशत पुगेसम्म स्वायत्तता हुने ? यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि लागु हुन्छ । तपाईहरुले ६ प्रतिशतभन्दा फरक नहुनेगरी ब्याजदर लिनु, १६ प्रतिशत भन्दा नबढाउनु । १६ प्रतिशतमा ब्याज लिनदिन हुन्छ भने १० प्रतिशत ब्याज दिनु भन्ने सिद्दान्त अबलम्बन गरेको हो । यो कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयनमा कुनै दुबिधा हुँदैन । दुबिधा हुने गुन्जायस पनि छैन । कानूनमा आधारित भएर गरेको निर्णय मान्दैनौ भन्नेलाई कारबाही हुन्छ । थोरै पुँजी लिएर बसेकालाई बढी भन्दा बढी ब्याज लिएर डुबाउन पाईदैन ।
अहिलेपनि धितोराख्ने चर्को ब्याज लिने, लिलाम गर्ने, आफै सकार्ने अनी सदस्य डुबाउने गरेको रिपोर्ट धेरै आएको छ । हामी अनुगमन गर्छौ । कारबाही हुन्छ । अब स्थानीयतहले नी अनुगमन गर्छ । काठमाडौं बेसर दार्चुलाको सहकारी नियमन पनि हुन्दैन । भोली फेरी स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्यो भनेर नभन्नु होला, गर्छ । अब त्यो दिन आएको छ ।
( नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गाैतमले दिएको मन्तब्यमा आधारित )
लकडाउनको असर: पाँचतारा साकोसले सदस्यलाई दुई हजार रुपैंयाँ राहत दिने
काठमाडौं । पेप्सीकोलामा रहेको पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले न्यून आय भएका
नवनियुक्त पदाधिकारीलाई मन्त्री अर्यालले दिइन कडा निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नवनियुक्त